MyLann Foodie's Review #4 (Thai 47 Restaurant, Bar & Cafe) 1159 views
MyLann Foodie's Review #4 (Thai 47 Restaurant, Bar & Cafe)
"MyLann Foodie's Review" အစီအစဉ် #4
*** Thai 47 Restaurant, Bar & Cafe
ဒီနေ့တော့ ဆိုင်အသစ်စက်စက်လေးတစ်ဆိုင်ကို ရောက်နေပါတယ်.. ဆိုင်အသစ်ဆိုပေမဲ့လည်း စားသုံးသူများနဲ့ စည်ကားနေပြီးတော့ ငြိမ့်ငြိမ့်ညောင်းညောင်းတေးသွားက ဆိုင်အဆင်အပြင်နဲ့ လိုက်ဖက်စွာ ပျံ့လွင့်နေပါတယ်.. သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သော နေရာထိုင်ခင်း၊ ဆိုင်ထောင့်တစ်နေရာက ဘားကောင်တာ၊ လှလှပပ ချိတ်ဆွဲထားသော မီးအုပ်ဆောင်းများ၊ နံရံတွင် အလှဆင်ထားသော ဓာတ်ပုံကားချပ်များနှင့် Thai 47 က စားသုံးသူအတွက် နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းနေပါတယ်..
ဆိုင်အတွင်းနေရာယူလိုက်ရင်ပဲ ဖော်ဖော်ရွေရွေအပြုံးနဲ့ စားပွဲထိုးလေးတစ်ယောက် Menuစာအုပ်တွေ လာပေးပါတယ်.. Menuစာအုပ်က ခမ်းနားသလုို စာအုပ်ထဲက စားစရာတွေကလည်း တစ်ခမ်းတစ်နားရှိလှပါတယ်.. စားစရာ ပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းဟာ အထူးတလည်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာ သိသာပါတယ်.. ရွေးစရာတွေ တော်တော်များနေတဲ့အထဲကမှ ထူးခြားတဲ့အတွဲအစပ်တစ်ခုကို သတိထားလိုက်မိတယ်.. အဲ့ဒါကတော့ အုန်းထမင်း၊ ကြက်ကြော်နဲ့ ယိုးဒယားသင်္ဘောသီးထောင်းကို တွဲဖက်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်.. ခဲတစ်လုံးနဲ့ ငှက်သုံးကောင်ပစ်ရသလိုပဲ ကျွန်မလို အရသာ အမျိုးမျိုးကို မြည်းစမ်းကြည့်ချင်သူအတွက်တော့ အတော်သဘောကျမိပါတယ်.. ဘာလို့ အဲ့လိုတွဲစပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်း နောက်မှပဲ သဘောပေါက်သွားပါတယ်.. အအေးကိုတော့ Smoothie ထဲက Mixed Berryကိုပဲ ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်..
မှာထားတဲ့ အုန်းထမင်းမရောက်ခင် Mixed Berry ကို အရင်လာချပေးပါတယ်.. Blueberry, Strawberry နဲ့ yougrtတို့ကို ရောနှောကာ ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ်ဖြစ်အောင် ဖျော်ထားပြီးတော့ Blueberryရဲ့အရသာ ပိုကဲထားပါတယ်.. ဒိန်ချဉ်ကြောင့် ခံတွင်းကို ရှင်းစေပါတယ်.. အုန်းထမင်းရောက်လာပါပြီ.. ပထမဦးဆုံးသတိထားမိတာကတော့ ကြက်ကြော်မှ မွှေးပျံ့ပျံ့ရနံ့ပဲဖြစ်ပါတယ်.. အနံ့နဲ့တင် တော်တော်စားချင်စရာ ကောင်းနေပါပြီ.. အဲဒါနဲ့ အုန်းထမင်းကို စတင်မြည်းစမ်းကြည့်ပါတယ်.. အိုး !! အုန်းထမင်းအရသာက တကယ်ကို ထိထိမိမိရှိပါလား.. အုန်းသီးအရသာက ပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ရှိသလို အပေါ့အငန်ကလည်း အနေတော်ပဲ.. အုန်းထမင်းကို အချိုးကျကျဖြစ်အောင် ချက်ထားတဲ့အတွက် တော်တော်လေး သဘောကျသွားပြီးသကာလ ကြက်ကြော်ကို ဆက်မြည်းကြည့်ပါတယ်.. အစပ်အရသာအနည်းငယ်ပါတဲ့ ကြက်ကြော်မွှေးမွှေးလေးဟာလည်း မပျော့မမာအနေအထားနဲ့ တကယ်ကို အဆင်ပြေလှပါတယ်.. ပုံမှန်အတိုင်းဆို ကြက်သားအတွင်းပိုင်းထိ အရသာဝင်နေတာ ရှားပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ အခုကြက်ကြော်ကတော့ အရသာက အထဲထိ စိမ့်ဝင်နေပါတယ်.. သင်္ဘောသီးထောင်းကိုတော့ အစပ်ကဲထားပြီး အရသာက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရှိလှပါတယ်.. အအီအစိမ့်ဖြစ်တဲ့ အုန်းထမင်းကို သင်္ဘောသီးထောင်းစပ်စပ်လေးနဲ့ အအီဖြေတဲ့သဘောကို သိရှိလိုက်ရပါတယ်.. စားစရာတစ်ပွဲတည်းမှာပြီး အရသာ(၃)မျိုးကို မြည်းစမ်းလိုက်ရလို့ ကျွန်မ အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်မိပါတယ်.. ပြီးတော့ စားသောက်နေစဉ်အတွင်းမှာလည်း ဆိုင်မန်နေဂျာမှ အဆင်ပြေပါရဲ့လားဆိုပြီး ဂရုတစိုက်မေးလာပါသေးတယ်.. Serviceရော၊ အရသာပါ ကောင်းမွန်တဲ့ဆိုင်လို့ မှတ်ချက်ချမိပါတယ်..
Chewy Junior 47 Branch ကို ပိတ်လိုက်ပြီလို့ သိရတော့ Puffတွေ၊ Waffleတွေ၊ Korean Foodတွေနဲ့ ဝေးရပြီဆိုပြီး တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာ.. ခုတော့ Bar Time အတွက်လည်း အဆင်ပြေတဲ့အပြင် အရသာ ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ ယိုးဒယားစားသောက်ဆိုင် ထပ်ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ အတိုင်းထက်အလွန် ဝမ်းသာမိသလို ကြိုလည်းကြိုဆိုပါတယ်ရှင်..
Thai 47 Restaurant, Bar & Cafe
No (153), Corner of 47th Street & Anawyahta Road, Botahtaung Township
"MyLann Foodie's Review" #4
I got toanewly opened restaurant this time... Even though it was very recently opened, I sawalot of customers enjoying their lunch withasoft music background andanice decoration... With its eye-pleasing wall pictures, neat and tidy layout, attractive bar corner, and the soft lights handing from the ceiling, Thai 47 is definitelyapleasant place to dine in...
Once I entered the restaurant, one welcoming staff smiled at me and brought in food & drink menus in timely manner... Menus are nicely done with ample tasty-looking photos that helped me see what dishes look like... Among lots of options to choose from, one combination caught my attention... which wasaset of steamed Coconut Rice, Deep Fried Chicken and Green Papaya Salad... Foraperson like me who wants to try different tastes in one meal, the choice was satisfying just like one stone three birds... Foradrink, I chose Mixed Berry Smoothie...
Mixed Berry Smoothie arrived shortly after I ordered and before the main dish... It wasathick mix of blueberry, strawberry and yogurt, with more dominant blueberry flavor... Yogurt inside the smoothie makes me really refreshed... Main dish arrived and the very first thing I noticed was the nice fragrant of deep fried chicken... I was already smiling just with the smell... I started to try coconut rice and Oh! the taste of coconut was subtle with good amount of saltiness and everything... Since I was quite satisfied with coconut rice, I moved on to try the fried chicken... With its little spicy taste, that fragrant deep fried chicken also hadagreat tender texture... Usually when chicken is deep fried, it is very hard for the inner part to have good taste... Thai 47 fried chicken has nice taste throughout the entire piece, which made me salute the chef... Okay, for green papaya salad, it was quite spicy and made with fresh ingredient, so to me, the coconut-y taste was really balanced out by the spiciness of green papaya salad...
I was extremely satisfied and happy because I got to taste three different flavors in one set of meal... Another thing is, while I was eating, restaurant manager came to me and asked if everything was okay... To summarize, Thai 47 is good in all three categories, food quality, decoration & customer service... Before Thai 47, that place was previously Chewy Junior 47 Branch.. When it was closed down, I was quite sad because it was the closest location for me to get to eat tasty cream puffs, waffles, and Korean cuisines, but now with this Thai 47 restaurant, bar & cafe together with its authentic Thai cuisines, I guess I am quite happy and welcoming its new opening...